10.9.2020, Full time , Distribution / Logistic
•	လုပ်ငန်းရှင်များ (သို့) လုပ်ငန်းမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံစကားပြောဆို၍ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	၎င်းတို့ထံမှ သိရှိလာသော လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သဘောပေါက်၍ မိမိတို့ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ရောင်းချပေးနိုင်သော ထုတ်ကုန်များအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ပြောကြားနိုင်ရမည်။
•	ထိုသို့သွားရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရန် လိုအပ်မည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းအဝဝကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည်။
•	ဈေးကွက်အတွင်းရှိ မိမိတို့၏ ဖောက်သည်ဖြစ်လာရန် အလားအလာရှိသော ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းရှင်များကို ရှာဖွေကာ ဆက်သွယ်၍ အထက်မှ လုပ်ငန်းတာဝန်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရမည်။
•	ဖောက်သည်အသစ်များရှာဖွေရုံသာမက မိမိတို့နှင့် လက်ရှိတွင် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီများနှင့်လည်း ဆက်လက်ဆက်သွယ်ကာ ရေရှည်ဖောက်သည်ဖြစ်လာစေရန် ကြိုးပန်းရမည်။
•	လက်ရှိချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နေသောကုမ္ပဏီများနှင့် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးထူထောင်၍ ဈေးကွက်ကို လက်လှမ်းမီသရွေ့ချဲ့ထွင်ရန်လည်း ကြိုးစားရမည်။
•	အသက် - ၂၀ မှ ၂၇ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	ပညာအရည်အချင်း - ဘွဲ့ရ (သို့) တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
•	. အရောင်းအတွေ့ အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) နှစ်ရှိရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ သင့်တင်လျောက်ပတ်စွာ စကားပြောဆိုတတ်ရမည်။
•	အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ လမ်းညွှန်ပြသမှုများကို လိုက်နာ၍ အဆင်ပြေပြေ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
•	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သော တက်ကြွဖြတ်လတ်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်သောသူ ဖြစ်ရမည်
Work location No 18-24, Kun Gyan Road, Aung San Stadium Bldg. (South), Yangon, Myanmar Yangon
•	Must have creative idea for caption position writing & customer service feedback. •	Build and implement the overall digital marketing strategy . •	Plan digital marketing campaigns including web,email,social media and display advertising. •	Measure and report on the performance of all digital marketing campaigns. •	Suggest activities for improving the quality of online content. •	Report monthly sales results to director.
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ သင့်တင်လျောက်ပတ်စွာ စကားပြောဆိုတတ်ရမည်။ •	အတွေ့အကြုံရှိသော ဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ လမ်းညွှန်ပြသမှုများကို လိုက်နာ၍ အဆင်ပြေပြေ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပ� ...
Sales & Marketing Associate Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobs in Yangon GANDAMAR O.A. & Business Solutions Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Distribution / Logistic Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Naypyitaw City 663 Days